Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny valanaretina Coronavirus any Alemana
Alemanina dia nitatitra iray hafa # COVID19 raharaha Mpivady avy Erkelenz dia naterina nankany amin'ny renivohitr'i Rhine-Westphalia Düsseldorf Avaratra tamin'ny fiara mpamonjy voina manokana ary niditra tao amin'ny tobin'ny oniversite. Farafaharatsiny farafaharatsiny iray tamin'ireo roa no nanaporofo fa tsara ho an'ny Coronavirus. Mitoka-monina izy ireo izao.
I Erkelenz dia tanàna iray any Rhineland any andrefan'i Alemana izay 15 kilometatra atsimo andrefan'ny Mönchengladbach eo amin'ny sisiny avaratry ny Cologne Lowland, eo anelanelan'ny faritra Rhine Ambany sy ny Lower Meuse. Tanàna antonony izy ary lehibe indrindra ao amin'ny distrikan'i Heinsberg any North Rhine-Westphalia.
Duesseldorf sy Cologne no tranon'ny festival lehibe indrindra fizahan-tany any amin'ny faritr'i Fetibe. Vita anio alina ny Karnavaly.
Araka ny eTurboNews Loharanom-baovao avy any Alemana miorina ao Duesseldorf, tranga maro hafa amin'ny COVID-19 no antenaina hambara any Alemana atsy ho avy ary eo am-panaovana fanadihadiana.
Alemana no mpampiantrano ny ho avy Fampisehoana ara-barotra ITB ao Berlin. Berlin dia kilometatra an-jatony miala amin'ireo tranga roa voalaza ireo, na izany aza.
Tamin'ny tranga iray tsy misy ifandraisany ary araka ny filazan'ny governemantam-panjakana Alemanina Baden Wuerttemberg, lehilahy iray hafa, 25 taona Göppingen County, dia voan'ny aretina tantely ihany koa ary nampidirina hopitaly. Niverina tany Alemana izy avy any Milan, Italia, izay nalaza be izao ny Coronavirus.